၃ နှစ်​ ၃ မိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၃ နှစ်​ ၃ မိုး
၃ နှစ်​ ၃ မိုး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတံုး on Jul 22, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
. ရှေးရှေးက ယောက်ကျားလေး တွေဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရဖို့ အတွက် ၃ နှစ် ၃ မိုး စောင့်ခဲ့ရပါ သတဲ့။
ကျနော့် အဖို့မှာတော့ သူ့အချစ်ကို ရဖို့အတွက် ၃ နှစ်ထိ မစောင့်ခဲ့ရတာ ကံကောင်းလို့ပေါ့။ အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ် တကဲကဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို “ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ဖောင်ဖျက် ဗျူဟာ” နဲ့ သူ့အချစ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
သူ အဖြေ ပေးခဲ့နေ့ တစ်နည်းအားဖြင့် သူနဲ့ ချစ်သူ စဖြစ်တဲ့ နေ့ဟာ 22 July 2013။ ဒီနေ့ 22 July 2016 ဆိုတော့ ချစ်သူ သက်တမ်းဟာ ၃ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။ စိန်ရတု၊ ရွှေရတု၊ ဘာရတု ခေါ်ရမလဲတော့ မသိ။
ဒီ ၃ နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ မျက်စိ တစ်မှိတ် အတွင်းမှာပဲ ကုန်လွန်သွားတယ် ထင်ရလောက်အောင် မြန်လွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန် အတွင်းမှာပဲ သူ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အကြောင်း တော်တော်လေး သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတတ် တာဟာ ဓမ္မတာပဲ မဟုတ်လား။
ကျနော် သိတဲ့ သူ့အကြောင်း များထဲမှာလည်း အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲလို့ ပါနေတာပါပဲ။ သူ သိတဲ့ ကျနော့် အကြောင်းမှာလည်း အကောင်း၊ အဆိုး ရောပွမ်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဘာတွေ ကောင်းတယ် (ဘာတွေ ဆိုးတယ်) ဆိုတာတော့ မပြောတော့ ပါဘူး။ လူကြား သူကြား ငါးချဉ် ရောင်းသလို ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့ သီချင်းထဲက လိုပေါ့ …
“လူ တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်ကြီးပဲ လိုချင်လို့တော့ မရဘူးကွယ်။ ဒွန်တွဲတဲ့ ဆိုးကွက်လည်း ပါမယ်”
သူ့ကို ချစ်တော့လည်း ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးရတာပေါ့။
နားလည် ခွင့်လွတ်မှု ဆိုတဲ့ အတိုင်း မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ကောင်းတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဖြည့်တွေးလို့ ဒီလက်တွဲ ခိုင်မြဲ လာခဲ့တာ ၃ နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။
၃ နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ ချစ်စ၊ ခင်စ၊ ကြင်နာစ အချိန်ထက် လူကို ပိုပြီး ရင့်ကျက် စေခဲ့တယ်လို့ ပြောရမလား။ ဘယ်လို ပြောရမလဲတော့ မသိ။
ဟိုအရင်ကလို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်၊ ဘယ်လောက် မြတ်နိုးလှပါတယ်လို့ ပါးစပ်က တဖွဖွ ပြောနေတာထက် ရှေ့လာမယ့် အနာဂါတ် အရေးက ခေါင်းထဲကို ရောက်ရောက် နေတတ်ခဲ့စေတယ်။
ဒီအချက် ကပဲ အရင်လို မချစ်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး ထင်စေတတ်ပြန်တယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော ၃ နှစ် ဆိုတာ လက်ထပ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပါပဲ။
ရှေးရှေးက ဆိုတာ ၁၉၉ဝ ဝန်းကျင် က ဆို သက္ကရာဇ် ၂၀၀ဝ ထိ စောင့်သူရှိခဲ့ပါတယ်။
၁ဝနှစ် ၁ဝမိုး ပေါ့။
ရီးစားမဟုတ် ဘာမဟုတ် က မှ တကယ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာပါ ပြောရင် ကိုယ့် ကို အရူးပြောမဲ့ ခေတ်မို့ မပြောတော့ပါဘူး။:D
၃နှစ် Anniversary ကို တစ်ချို့က Glass လို့ ညွန်းတာဘဲ။
ဒီ နှစ်ယောက်တော့ ဝါကျွတ် ကို စောင့်နေကြပြီ ထင်ရဲ့ ရွာသူ ရွာသားများရေ။
ကောင်းပါတယ်၊ သိပ်ကြီး သွားရင် ကလေး ကို ကိုယ့် မြေး ထင်နေကြတဲ့ အဖြစ်ရောက်တတ်တယ်။ :-)))
တူနှစ်ကိုယ် လက်တွဲ ကြမယ် ဆိုရင်တော့ အရေးကြီးဆုံး က ရိုးသားဖို့ နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ သိပ်မထားကြ ဖို့ပါဘဲ။
အရှိ ကို အရှိ အတိုင်းလေး အမှန် သိပြီး အဲဒါကို လက်ခံ နိုင်မှ ရေရှည် ခိုင်မြဲမှာပါ။
အိမ်ထောင်သည် ဘဝ ဆိုတာ နုနုရွရွ နဲ့ လှလှလေး စိတ်ကူးယဉ် ဖို့ ကောင်းတဲ့ ပန်းခင်း မဟုတ်။
ရေစီး ကြမ်းတဲ့ မြစ်ထဲ မှာ ရေဆန် ကို အချင်းချင်း ဖေးမ လို့ လှော်ကြရမှာ။
ခရီးမှာ လှတဲ့ ရှုခင်းလဲ ရှိ၊ မုန်တိုင်းလဲမိပေါ့။
စွန့်စားတာ ကြိုက်တတ်ရင် ပျော်စရာပါ့။
အရီး ချစ်သော လုံမနဲ့ မောင်အံ တို့ လက်ညီညီ နဲ့ လှော်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ :-)))
ဦးမိုက်က ပြောဖူးတယ် . . . လက်မထပ်လည်း ချစ်နေလို့ရတယ် တဲ့ . . . အဲဒီမှာ လက်ထပ်ဖို့အရေး ဟိုဟာဖြစ်မှ ဒါကြီးရှိမှ ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာတွေ လျော့သွားတယ် . . . ချစ်သူဆိုတာ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ချစ်နေဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ တွေးမိသွားတယ် . . . ဖိအားပေးပြီး စိတ်ညစ်အောငိလုပ်တာတွေ နည်းသွားတယ် (လုံးဝ မရှိတာတော့ မဟုတ်) . . သူ့ကို ယုံကြည်ပေးလိုက်တယ် . . .
တကယ်တမ်း လက်ထပ်ဖို့တွေးလိုက်ရင် သတ္တိမရှိသေးဘူး . . . နောက်ဆံတင်းစရာမရှိဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်မရှိတော့မှာ စိုးနေတယ် . . . ဒီလိုလေးနေရတာ အေးချမ်းပါတယ်လေ
၅ယောက်မွေးဟေ့… လက်၁ဖက်.. လက်၅ချောင်းနဲ့… တခါ…။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားတယ်ဆိုတာ… ကိုယ်တင်မဟုတ်.. ၂ဖက်ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ.. တရားဝင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါတ်သက်စေရတာပါ…။
တပြိုင်ထဲ… ထဲထဲဝင်ဝင် မပါတ်သက်လွန်းအောင်လည်း… အိမ်ထောင်ရှင်တွေမှာ… တာဝန်ရှိပြန်ရော…။
…၂ယောက် ကျောချင်းကပ်.. ပြဿနာပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့အတွက်… အင်အားလည်းပိုကောင်းသပေါ့…။
ကလေးရှိလို့ စရိတ်ပေးတဲ့ခေတ်ရောက်ရင် ၅ ယောက်မွေးမယ် တဂျီး
ယူချင်မှ သာ ယူဂျနော်။
မြှောက်ပေးခံရလို့ ယောက်ကျားတွေ ယူ မိန်းမတွေ ယူ ကလေးယူ ခွေးမွေး စတာတွေ မလုပ်ကြလင့်။
အကျင့်စရိုက်ချင်း လုံးဝမတူကြတဲ့အတွက် ကောင်းကွက်ထက် ဆိုးကွက်တွေက များနေမှာ အမှန်ပါပဲ . . . နောက် ကိုယ်တိုင်ကလည်း (တစ်ခါတစ်ခါ အမေတောင် သည်းမခံနိုင်လောက်အောင်) ဂဂျီဂဂျောင် သိပ်များပါတယ် . . . ဒါကို မငြိုမငြင်နဲ့ သည်းခံပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . .
နောက် မတူတဲ့အကျင့်တွေထဲမှာ အပေါင်းအသင်းများတာက အဓိက ပါပါတယ် . . . သူက သူငယ်ချင်းရယ်လို့ သိပ်မရှိ . . .အပြင်တွေသိပ်မထွက်ပေမယ့် . . .ကိုယ်ကတော့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့တာ သွားတာလာတာ သိပ်များပါတယ် . . . အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေ များပါတယ် . . ခုချိန်အထိ သစ္စာတရားကို ယုံကြည်ပေးပြီး ဘယ်တော့မှ သဝန်မတိုခဲ့တာ . . . ပြသနာမရှာခဲ့တာ . . . အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဖုန်းတောင်မဆက်ခဲ့တာ . . . အဲဒီလို နားလည်ပေးမှုတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
နောက်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့ ရန်လုပ်မိတဲ့အခါတွေမှာလည်း စိတ်မဆိုးဘဲ သည်းခံပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . .
နောက်ဆုံး ပူလောင်တဲ့အချစ်ထက် အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာကို ပေးခဲ့တာ . . . မေတ္တာတရားကို သင်ကြားပေးခဲ့တာအတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့
အဝတ်အစား ဝတ်ရအောင် ဝိတ်လေး ဘာလေး ချမို့။
…..ဘာပဲ ပြောပြော ၃ နှစ် ဆိုတာ လက်ထပ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပါပဲ…..
ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပါဘဲ ဆိုတာ
ပြောတယ် ဆိုတာ နဲ့
မွန်မွန် ရစ်မရစ်တော့ သိဘူး တီအိတော့ ရစ်ပေးလိုက်ပီ
.ပြောလိုက်တာနဲ့ တူတူပါဘဲ ဆိုတာ
.ပြောတယ် ဆိုတာ နဲ့
သဝေထိုး ရရစ်တွေ ပျောက်နေလို့ ပြန်ရေးထားတာနော်
အို…… အံစာရေ နီဝအောင်လုပ်ပါလေလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မာမူခိုင်ရေးတဲ့ ဖူးစာ ဆိုပြီး တစ်ပုဒ်လောက် ရေးသင့်တယ်
၃နှစ်၃မိုး စိုပေမဲ့ ပွာတဂမ်း လာဘ်တကမ်း နေလို့လား၊ လိင်ယာဉ်၂ပ ျစ်..
ကိုယ်မထားနိုင်သေးတဲ့ သတ္တိ မျိုး တွေ တွေ့ရတော့ အားပေးတယ်ကွယ် …
၃ နှစ်မှာလက်ထပ်သင့်ြပြီလို့ဆိုရင် ခါင်းညိမ့်ဖို့အတွက် အထောက်ကူပြုပစ္စည်းလေးတွေတော့လိုသပေါ့